८० प्रतिशत रोजगार दिने कलेज, जहाँ १० प्रतिशत भारतीय अध्ययन गर्छन्
विराटनगर , ७ साउन । । मेरिल्याण्ड कलेज विराटनगरमा अध्ययनरत ७६ छात्रछात्रा स्नातक तह बजार व्यवस्थापन (बिबिएम) विषयको उपाधिका साथ दीक्षित भएका छन् । बेलायतको ब्लभरह्याम्टन विश्वविद्यालयवाट सम्बन्धनप्राप्त सो कलेजले चार
नेताहले नै अस्पताल सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृतिः स्वास्थ्मन्त्री
काठमाडौं, ३२ असार । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले राजनीतिज्ञले नै अस्पताल सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनेक विकृति आएको बताउनुभएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान शिक्षण
शिक्षा मन्त्रीको डा केसीलाई कडा चेतावनीः भने, ‘डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन बल प्रयोग हुनसक्छ’
काठमाडौं, २९ असार । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य कमजोर भए बल प्रयोग गरेर भएपनि काठमाडौं ल्याइने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘त्यसबेला बल प्रयोग
विद्यार्थीहरुका लागि खुशीको खबरः शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण प्रदान
पाल्पा, २७ असार। सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरेसँगै स्थानीय सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्न थालेका छन् । जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिकाले युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर
काठमाडौं, २५ असार । निजी नर्सिङ शिक्षण संस्थाको दवावमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले नर्सिङ शिक्षाको शुल्क वृद्धी गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । नर्सिङ विषय अध्ययन गर्ने संस्थाले
उर्लाबारी, मोरङ, १६ असार (रासस) ः पथरीशनिश्चरे–१ स्थित एभरेष्ट बोर्डिङ स्कूलले २०७४ सालको एसइई परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने दुई विद्यार्थीलाई जनही रु एक एक लाख पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको चरम लापारबाहीः नौं हजार विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन
काठमाडौं, १३ असार । एसईई नतिजा प्रकाशनमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको त्रुटीले समग्र नतिजा नै परिवर्तन भएको छ । त्रुटि पत्ता लगाएपछि ९ हजार ६४ विद्यार्थीको ग्रेडसिटमा जीपीए थपघट भएको छ
नेपालमा पुरुष नर्स उत्पादन हुने बाटो खुल्यो, १५ प्रतिशत कोटा छुट्याइयो
काठमाडौं, १० असार । नर्स भन्नेबित्तिकै आमनेपालीको दिमागमा एप्रोन लगाएर अस्पतालमा खटिएकी युवती वा महिलाको तस्विर आउँछ। हुन पनि नेपालमा नर्सहरु महिला नै छन्। त्यही कारण नेपालमा नर्स र महिला
यस पटक SEE मा नेपाल टप गर्ने को कहाँबाट र को हुन ?
काठमाडौं, १० असार । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले शनिबार सार्वजनिक गरेको २०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) परीक्षाको नतिजामा भक्तपुरका महेन्द्र विद्या आश्रमका छात्र नेपाल टप भएका छन्
Breaking News: SEE को नतिजा आज ४ बजे प्रकाशित हुदैं, यसरी नतिजा हेर्न सकिन्छ
काठमाडौं, ९ असार । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत चैतमा लिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा आज प्रकाशित गर्न लागेको छ । परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीले सम्पूर्ण तयारी सकिएकाले शनिबार
SEE को नतिजा अब ५ दिन पछि सार्वजनिक गरिने
काठमाडौं, ६ असार । २०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, एसर्इईको नतिजा अब ५ दिन पछि सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ ।परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले अबको एक हप्ताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने
दुई तीन दिन सम्म अझै बर्षाले सताउने छ
काठमाडौं, २० बैशाख । पूर्व मनसुनी वर्षा ‘प्री–मनसुनी’सक्रिय भएसँगै बाहिरी वायुको प्रभावका कारण एक सातादेखि नेपालमा मनसुनी गतिविधि बढेको छ । प्री–मनसुनसँगै बंगालको खाडीबाट आएको जलवास्पयुक्त हावा र पश्चिमी वायुको प्रभावले